Donny van de Beek oo loo sheegay inuu ku saxnaa go’aankii uu isaga diiday inuu u dhaqaaqo Spain oo uu ugu biiray Manchester United – Gool FM
Donny van de Beek oo loo sheegay inuu ku saxnaa go’aankii uu isaga diiday inuu u dhaqaaqo Spain oo uu ugu biiray Manchester United
(Manchester) 07 Seb 2020. Donny van de Beek ayaa loo sheegay inuu ku saxnaa go’aankii uu isaga diiday inuu u dhaqaaqo dalka Spain oo uu ugu biiray Kooxda Manchester United.
Halyeyga reer Holland ee Wesley Sneijder ayaa u sheegay Donny van de Beek inuu ku soo baxayo kubadda cagta Ingiriiska in ka badan intii uu ku soo bixi lahaa kubadda cagta Spain, isagoo aragti ka dhiibanayey ku biirista laacibkan ee Kooxda Manchester United.
23-sano jirkaan ka soo baxay akadeemiga kooxda reer Holland ee Ajax ayaa lacag qaali ah oo dhan 35 milyan oo gini oo u dhiganta 46 milyan oo dollar ugu biiray kooxda ku dheesha garoonka Old Trafford.
Sneijder ayaa sheegay in xiddig dhammaystiran ay gacanta ku soo dhigtay, isagoo ciyaaryahankii hore ee Ajax iyo Real Madrid uu rumeysan yahay in xiddiga ay isku Waddanka yihiin waqtigii ugu haboonaa uu ku biiray kooxda reer England.
Waxa uuna yiri Sneijder: “Hadda waa waqtigii shaxda ahaa.
“Manchester United waa koox cajiib ah, waxaan u malaynayaa inuu isagu halkaas ku fiicnaan doonaan, islamarkaana uu ku soo bixi doono kubadda cagta England in ka badan kubadda cagta Spain.
“Waa ciyaaryahan dhammeystiran, dhabtii waan jeclahay ficilkiisa orodka ah.”
Van de Beek ayaa khadka dhexe ee kooxda ku dheesha garoonka Old Trafford kala soo muuqan doona labada ciyaaryahan ee Bruno Fernandes iyo Paul Pogba, iyadoo Man United horyaalka Premier League ay ku furan doono xilli ciyaareedkan 2020-21 kulan ay la ciyaari doonaan kooxda Crystal Palace 19 bishan September.
Tababare Gareth Southgate oo safka xulka qaranka England ka saaray laba xiddig... (Maxay tahay sababta?)